I-FAQs -I-AOOD yeTekhnoloji encinci
Uthini umahluko wesiliphu esityibilikayo kunye neemanyano ezijikelezayo?
Zombini iziliphu zokutyibilika kunye neemanyano ezijikelezayo zisetyenziselwa ukuhambisa imithombo yeendaba ukusuka kwinxalenye ejikelezayo iye kwindawo emileyo ngelixa ujikelezayo. Kodwa imithombo yeendaba yamasongo esiliphu ngamandla, uphawu kunye nedatha, imithombo yeendaba ezijikelezayo yimithombo yolwelo kunye negesi.
Njani malunga newaranti yeAOOD ezijikelezisa iimveliso zombane?
I-AOOD inewaranti yonyaka kuzo zonke iimveliso ezijikelezayo zombane ngaphandle kwamakhonkco esiko. Ukuba nayiphi na iyunithi ayisebenzi kakuhle phantsi kobume obuqhelekileyo bomsebenzi, i-AOOD iya kuyigcina okanye iyibuyisele simahla.
Uyikhetha njani imodeli yesazisi esifanelekileyo kwisicelo sam?
Inani leesekethe, zangoku kunye nevolthi, i-rpm, ubungakanani bomda buya kugqiba ukuba yeyiphi imodeli ye-AOOD slip ring efunekayo. Ukongeza, siya kuqwalasela esona sicelo sakho (ukungcangcazela, ixesha eliqhubekayo lokusebenza kunye nohlobo lomqondiso) kwaye wenze esona sisombululo sisiso kuwe.
Kutheni le nto kufuneka ndikhethe i-AOOD TECHNOLOGY LIMITED njengeqabane lethu lesiliphu? Yintoni inzuzo yakho?
Injongo ye-AOOD kukwanelisa abathengi. Ukusuka kuyilo lokuqala, ukhetho lwezixhobo, imveliso, uvavanyo, ukuhanjiswa kunye nokuhanjiswa kokugqibela. Sisoloko sinikezela ngeyona nkonzo ibalaseleyo kwaye siqiniseke ukuba abathengi bethu banokufumana ezona mveliso zisemgangathweni ngexesha elifutshane.
I-AOOD ingayithintela njani isiliphu esisongelo kuphazamiseko lomqondiso?
Iinjineli ze-AOOD ziya kuthintela uphazamiseko lomqondiso ovela kwimiba engezantsi: a. Yandisa umgama wamakhonkco esignali kunye namanye amandla emakhonkco avela ngaphakathi kwiringi yesiliphu. b. Sebenzisa iingcingo ezikhuselweyo ezikhethekileyo ukuhambisa imiqondiso. c. Yongeza ngaphandle kwekhuselo lemisesane yempawu.
Leliphi ixesha lokuhambisa le-AOOD nje ukuba kwenziwe iodolo?
Sinezinto ezinobungakanani obufanelekileyo besitayile semilinganiselo yesiliphu esemgangathweni, ke ixesha lokuhambisa lihlala ngaphakathi kwiveki enye. Ukufumana amakhonkco amatsha eslip, kusenokwenzeka ukuba sidinga iiveki ezi-2-4.
Ndingayifaka njani iringi yesiliphu ngokubhora?
Ngokwesiqhelo siyifaka ngokufaka ishafti kunye nokuseta isikisi, sinokongeza i-flange ukuhambelana nofakelo lwakho ukuba ufuna.
Kwinkqubo ye-eriyali ye-2-axis yedijithali yolwandle yesatellite inkqubo ye-eriyali, ngaba ungacebisa ezinye izisombululo zeringi efanelekileyo?
I-AOOD ibonelele ngeentlobo ezininzi zamaphepha okutyibilika kwiinkqubo ze-eriyali, kubandakanywa iinkqubo ze-eriyali zaselwandle kunye neenkqubo zendlela ye-eriyali. Ezinye zazo ziyafuneka ukuba zihambise umqondiso wokuhamba okuphezulu kwaye ezinye zazo zifuna isidanga sokukhusela esiphezulu, umzekelo IP68. Sonke siyenzile. Nceda unxibelelane ne-AOOD malunga neemfuno zakho zeringi.
Ngokwanda kwetekhnoloji entsha, amakhonkco esiliphu aqhubela phambili ayimfuneko ukuhambisa imiqondiso ekhethekileyo. Zeziphi iimpawu ezinokudluliselwa ngamakhonkco e-AOOD?
Ngonyaka we-R & D kunye namava obambiswano, i-AOOD isiliphu sokuhambisa sidluliselwe ngempumelelo ukulinganisa isiginali yevidiyo, isignali yevidiyo yedijithali, isantya esiphezulu, ulawulo lwe-PLD, i-RS422, i-RS485, i-Inter Bus, i-CanBus, iProfibus, isixhobo seNet, iGiga Ethernet njalo njalo.
Ndijonge isiliphu sokuhambisa ukuhambisa i-1080P kunye namanye amajelo aqhelekileyo emiqondiso kulwakhiwo oluncinci. Ngaba unganikezela ngento efana nayo?
I-AOOD iphuhlise amakhonkco e-HD eekhamera ze-IP kunye neekhamera ze-HD ezinokudlulisela zombini isignali ye-HD kunye neempawu eziqhelekileyo kwisakhelo se-compact capsule slip ring.
Ngaba unayo into enokudlulisa i-2000A okanye ngaphezulu yangoku?
Ewe sinayo. Izihlanganisi ezijikelezayo zombane zisetyenziselwa ukuhambisa umbala ongasemva: # f0f0f0; ikhoyo ngoku.
Ukuba isiliphu sesilayidi sifuna isidanga sokukhusela, njenge-IP66. Ngaba torque iya kuba nkulu?
Ngobuchwephesha obuphambili kunye nonyango olukhethekileyo, i-AOOD inokwenza isiliphu esiringi hayi i-IP66 kuphela kodwa kunye ne-torque encinci entle. Nokuba iringi enkulu yesiliphu, siyenza isebenze ngokutyibilikayo nangokhuseleko oluphezulu.
Kwiprojeki ye-ROV, sidinga amajoyina ajikelezayo anokuhambisa imo yefayibha enye kunye namandla phantsi kolwandle olunzulu. Ngaba unokunikela into enjalo?
I-AOOD ibibonelele ngempumelelo kumanqanaba ajikelezayo ee-ROVs kunye nolunye usetyenziso lwaselwandle. Imeko yokusingqongileyo elwandle, sihlangene ngokudibeneyo kwifayibha optic ejikelezayo kwisazinge sombane, ukuhambisa ifayibha yomqondiso, amandla, idatha kunye nomqondiso kwindibano enye epheleleyo. Ukongeza, siyithathela ingqalelo imeko yokusetyenziswa, izindlu zetsimbi ezityibilikayo ziya kwenziwa ngentsimbi engenasici, uxinzelelo koxinzelelo kunye nenqanaba lokhuseleko IP68 nayo iya kwamkelwa.
Molo, iqela lethu liyila iprojekthi yeerobhothi, sidinga amalungu ajikelezayo erobhothi ukusombulula iingxaki zekhebula, ndazise onokwenza ngako.
Kwisicelo seerobhothi, isilingi esityibilikayo saziwa njengerobhothi ejikelezayo okanye iringi yesilayidi. Isetyenziselwa ukuhambisa uphawu kunye namandla ukusuka kwisakhelo sesiseko ukuya kwiyunithi yolawulo lwengalo yerobhothi. Inamacandelo amabini: indawo enye emileyo ibekwe engalweni yeerobhothi, kwaye enye indawo ejikelezayo inyuka esihlahleni serobhothi. Ngokudityaniswa kwerobhothi, irobhothi inokufikelela ngokungaguquguqukiyo okungama-360 ngaphandle kweengxaki zekhebula. Ngokweenkcukacha zeerobhothi, amalungu ajikelezayo erobhothi ahamba ngokubanzi. Ngokwesiqhelo irobhothi epheleleyo iyakufuna iringi zerobhothi kwaye ezi zityibilikisi zisenokuba neemfuno ezahlukeneyo. Ukuza kuthi ga ngoku, sele sibonisile amakhonkco e-compact capsule, ngokusebenzisa iiringi zesiliphu, i-pan ikeyiki, amalunga ajikelezayo e-electro-optic kunye nezisombululo ezijikelezayo zerobhothi.
Isisombululo sesiliphu sakho sivakala silungile, kodwa loluphi uvavanyo oluza kulwenza? Uqhuba njani?
Kwiindibano zesangqa zesilayidi esiqhelekileyo, ezinje nge-AOOD yesayizi encinci yokufaka isiliphu, siya kuvavanya amandla ombane kunye nomqondiso wangoku, uphawu, itorque, ingxolo yombane, ukumelana nokugquma, amandla ombane, ubukhulu, izixhobo kunye nokubonakala. Kwimigangatho yasemkhosini okanye ezinye izangqa ezikhethekileyo zokufuna isiliphu, ezinje ngesantya esiphezulu kwaye ezo ziya kusetyenziswa kwizithuthi eziphantsi kwamanzi, ukhuselo kunye nemikhosi esindayo yoomatshini, siya kwenza ukothuka ngomatshini, ukuhamba ngebhayisikile, ubushushu obuphezulu, ubushushu obuphantsi, ukungcangcazela, ukufuma, ukuphazamiseka komqondiso, iimvavanyo zesantya esiphezulu njalo njalo. Olu vavanyo luya kuhambelana nomgangatho wezomkhosi wase-US okanye iimeko zovavanyo ezichaziweyo ngabathengi.
Zeziphi i-HD-SDI zokutyibilika onazo? Sifuna uninzi lwazo.
Okwangoku, sinee-12way, 18way, 24way kunye ne-30way SDI slip rings. Zicwangcisiwe kwaye kulula ukuzifaka. Baqinisekisa ukuhanjiswa komqondiso ocacileyo weevidiyo ezichazayo kwaye banokuhlangabezana neemfuno zeTV kunye nokusetyenziswa kwefilimu.